Japana: Grumpy Jiisan ao amin’ny Nico Nico Douga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2018 9:58 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Português, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2008)
Rangahy iray mpisotro ronono avy any Arizona miantso ny tenany hoe “Grumpy Jiisan” [Anti-dahy Kizitina] no malaza ao amin'ny Nico Nico Douga, sampana iray fizarana lahatsary malaza be ao Japana, tato ho ato. Maka lahatsary hanehoany ny heviny momba ny anime (sarimiaina) Japoney tiany indrindra izy, izay haingoany amin'ny dongom-pasika sy lavabato ao aoriana. Tena malaza be ireo lahatsarin'i Grumpy Jiisan ao amin'ny Nico Nico Douga hany ka nahangona fanehoankevitra an'arivony [ja], nanampy soratra ny ankamaroan'ireo lahatsary ireo ireo mpampiasa ny Nico Nico Douga [ja]. Mpampiasa maro no nanao fanamarihana momba ny fahafehezany tsara ny zavatra resahany, gaga hoe [ja] lehilahy Amerikana dia liana be amin'ny anime Japoney.
Grumpy Jiisan ao amin'ny Nico Nico Douga
(Fanamarihana: tsy maintsy mampiditra ny famantarana anao ao anatin'ny vohikala ianao izay vao afaka mijery ireo lahatsary ao amin'ny Nico Nico Douga. Maimaimpoana ny fidirana saingy tsy maintsy manoratra anarana amin'ny takelaka amin'ny teny Japoney ianao. Jereo ity lahatsoratra (rohy maty) ao amin'ny Tokyotronic ity ahitanao ny fomba fanaovana izany.)
Manoratra momba ny lazan'i Grumpy Jiisan i Takekuma:
Hitako ny “Arizona no Rojin” [olona antitra avy any Arizona], ilay lehilahy voaresaka be ao anaty Aterineto. Nampiakatra lahatsary manodidina ny 50 isa ao amin'ny Youtube momba ny fijeriny ireo DVD ana anime io “Grumpy Jiisan” io, mponin'i Arizona mamoaka ny fandinihany ny anime ary toa mpankafy anime be.
Iray amin'ireo malaza be indrindra ao amin'ny Nico Nico Douga ny “Grumpy Jiisan mihomehy amin'ny borigady”.
Anatin'ilay lahatsary, nisy kamerà napetraka any an-tany efitra tsy misy monina, ary avy etsy andaniny misy rangahy be iray misy volombava fotsy mimonomonona “Haruhi Suzumiya ny androany” no sady manitrika ilay DVD anatin'ny fitaovana fandefasana. Avy eo, miresaka amin'ny fomba tsy mampiseho fihetsehampo mihitsy momba ny fahitàny ny tantaran'ilay anime izy raha sady mijery ilay sarimiaina.
Momba ny Haruhi, ohatra, nanome ny tombatombany izy, tsy nitsiky akory: “Anime adaladala ity, saingy nihomehy aho. Kintana 4.” Nampiana dikateny Japoney tanatin'izany ary nampiakarina tao amin'ny Nico Nico Douga. Raha mijery any ihany koa ianao, ho hitanao fa aorian'ny fijereny izany hatramin'ny farany no anombatombanany ny anime, ary mitombona avokoa ireo tsikera rehetra ataony, isan'izany ireo fanazavàna teknika. Izany no mahatonga azy malaza be ao anaty Aterineto, [izay nitenenan'ny olona fa] “izy no Ryusuke Hikawa an'i Amerika”, ary koa “Ity lahy antitra ity, moeru.” [Fanamarihana: Jereo ny lahatsoratry ny Wikipedia momba ny “moe”. ]
Ny lahatsary faran'i Grumpy Jiisan ao amin'ny YouTube.
Tsy momba ny “Hirare” irery ihany ny fandaharany, fa hita ao izay zava-drehetra voarain'ny tànany, [ireo lohateny toy ny] “The Girl Who Leapt Through Time,” “Paprika,” “Zipang“, ary “5 Centimeters Per Second“. Amin'ny farany [ilay lahatsary] manome ny marika hatrany amin'ny kintana 5 izy, ary nanome ny marika avo indrindra ho an'ireo lohateny rehetra voatonona ireo izy, tombana izay nety tsara tamin'ny otaku Japoney Amerikana iray nahita [ny lahatsariny] tao anaty Aterineto ary nanoratra “milay!”, sy “Tena takany tsara.” Miaraka amin'ny fomban'olona nampianatra mineralojia tany amin'ny anjerimanontolo, sy ny fomba fitantarany toy ny manampahaizana, [nahatsapa izany koa aho].
Isaorana i Taku Nakajima noho ny sosokeviny handikàna ity lahatsoratra ity.